mai 2017 - Page 2 sur 35 -
13 mey : Mpitandro filaminana 600 no hahetsika
13/05/2017 admintriatra 0
Mba hampizotra an-tsakany sy an-davany ny fahatsiarovana ny andron’ny 13 mey anio, dia nandray fepetra ny eo anivon’ny Emmoreg Analamanga. Fantatra fa mpitandro ny filaminana miisa 600 no hiasa sy hiparitaka eto an-drenivohitra mandritra ity …Tohiny
Androndra-Ampamantanana : Zazalahy 12 taona maty niraikitra tamin’ny andrin-jiro
Ankizilahy iray, vao 12 taona monja no nidiran-doza, ary namoy ny ainy, teny Androndra-Ampamantanana omaly maraina, tokony ho tamin’ny 09 ora sy sasany. Araka ny loharanom-baovao marim-pototra avy amin’ny fianakaviana, dia niraikitra tamin’ny andrin-jiro iray …Tohiny
Grevin’ny sendika : Filohana Federasiona no atidoha
Misy ireo olona mitondra ny anaran’ny mpitondra na koa mitonona ho mpanolontsaina manokan’ny filoha ary mampiasa izany amin’ny fomba ratsy manimba endrika ny fitondram-panjakana. Tsy mijanona fotsiny eo amin’ny fitadiavana tombontsoa manokana izany fisandohana andraikitra …Tohiny
Asa fanaovan-gazety : Tolotanana ho an’i Andry Ratovo
Ao anatin’ny tsy fahasalamana. Efa ho andro maromaro no manaraka fitsaboana eny amin’ny « Clinique Saint Paul » ny mpanao gazety Andry Ratovo. Ho fanohanana azy, mikarakara hetsika hanolorana izay foy ny fikambanan’ny mpanao gazety tanora na …Tohiny